सञ्चार मन्त्रालयलाई दीपकराज गिरीको सुझाव – चलचित्र विकास बोर्ड विघटन गरे के हुन्छ ?
Saturday, 31 Aug, 2019 2:59 PM
१४ भदौ, काठमाडौं । नेपाली फिल्म हलहरूमा किन कम समय टिक्छन ? जवाफमा आउन सक्लान – फिल्म स्तरीय बन्दैनन् । हलसम्म दर्शकलाई तान्ने क्षमता नेपाली फिल्मले राख्दैनन् । यद्यपि, राम्रै लगानी र मेहेनतमा फिल्म बनाए पनि अपेक्षा अनुरुपको व्यापार नहुनु कलाकारहरूको चिन्ताको विषय बनेको छ । राम्रा भनिएका फिल्महरू पनि लामो समय नचल्नुका कारण बलिउड फिल्मको ‘दबदबा’ रहेको कलाकारहरू बताउँछन् ।
शनिबार बिहान दीपकराज गिरीले एक स्टाटस लेखे । स्टाटसमा उनले ‘चलचित्र विकास बोर्ड विघटन गरे हुन्छ’ भन्दै सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेका छन् ।
उनको स्टास थियो– चलचित्र विकास बोर्ड विघठन गरे हुन्छ कि? सरकारको विद्यमान नीति अनुसार हामीले २ करोड लगानी गरेर नेपाली भाषाको फिल्म बनाउनुको कुनै अर्थ छैन । नेपाली फिल्म खास चल्दा पनि चल्दैन । राम्रो नि हुँदैन । त्यही २ करोड त शाहरुख खान, सलमानको फिल्म लगायत एक से एक विदेशी फिल्महरू आउँछ । ती फिल्महरू किनेर ल्याउने चलाउने, नेपाली फिल्मभन्दा सुरक्षित पनि हिन्दी फिल्म । राज्यले रातारात सेन्सर गराइदिइहाल्छ, सुविधा दिन्छ, हलहरूले पनि विशेष स्थान दिन्छन, किन टाउको दुाखउने बेकारमा ?
सबै मिलेर नेपाली फिल्म नबनाऔं विदेशी फिल्म किनेर चलाऔं । भाषा, संस्कृति भाडमा जाओस् ।, व्यापार मुख्य कुरा हो नि । त्यसपछि विकासबोर्ड पनि राज्यको खर्च पनि कम हुन्छ । करै उठाउने काम त कर कार्यालयले गरिहाल्छ नि होइन र ?’